Iindaba -Izinto ezintathu ekufuneka uziqwalasele xa ukhetha umqhubi okhokelwayo
Izinto ezintathu ekufuneka uziqwalasele xa ukhetha umqhubi okhokelwayo
Imveliso yamandla (W)
Eli xabiso linikezelwa kwii-watts (W). Sebenzisa umqhubi we-LED ubuncinci ixabiso elilinganayo nee-LED zakho.
Umqhubi kufuneka abe namandla okuphuma aphezulu kunokuba ii-LED zakho zifuna ukhuseleko olongezelelekileyo. Ukuba imveliso ilingana neemfuno zamandla e-LED, isebenza ngamandla apheleleyo. Ukubaleka ngamandla apheleleyo kunokubangela ukuba umqhubi abe nexesha elifutshane lobomi. Ngokufanayo imfuno yamandla yee-LED inikwa ngokomndilili. Ngokunyamezelana kongezwe ngaphezulu kwii-LED ezininzi, ufuna amandla aphezulu okuphuma kumqhubi ukuyigubungela le nto.
Isiphumo Ingozi (V)
Eli xabiso linikezelwa kwiivolts (V). Ukuqhuba rhoqo kubaqhubi bamandla ombane, kufuna imveliso efanayo neemfuno zevolthi ye-LED yakho. Kwii-LED ezininzi, imfuneko yombane nganye ye-LED yongezwa kunye ngexabiso lilonke.
Ukuba usebenzisa i-current, i-voltage yokuphuma kufuneka idlule kwiimfuno ze-LED.
Izinto ozilindile emhlabane
Abaqhubi baya kuza nobomi obulindelweyo kumawaka eeyure, eyaziwa ngokuba yi-MTBF (ixesha elithetha ngaphambi kokusilela). Unokulithelekisa inqanaba obaleka kulo ukuze usebenze kubomi obucetyisiweyo. Ukuqhuba umqhubi wakho we-LED kwiziphumo ezicetyiswayo kunceda ukwandisa ixesha lokuphila, ukunciphisa ixesha lokugcina kunye neendleko.
Iimveliso zeTauras zinewaranti ubuncinci iminyaka emi-3. Ngexesha lewaranti, sinikezela ngokutshintsha oku-1 ukuya kwayi-1.
Ixesha Post: May-25-2021